Atolory ny Tompo ny asanao - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-01 > Omeo baiko ny Tompo ny asanao
Mifanohitra amin'ny fahamarinana hitantsika ao amin'ny Baiboly izany - ary ny fahamarinana dia hanamaivana ny enta-mavesatrao! Ao amin’ny Ohabolana 16,3 Nasehon’i Solomona Mpanjaka antsika indray ny iray amin’ireo vatosoa manjelanjelatra: “Ankino amin’i Jehovah ny asanao, dia ho lavorary ny asanao”. Misy zavatra hafa ao amin’io andininy io noho ny fikatsahana ny maha-Kristianina mahatoky. Ny hoe "baiko" eto dia midika ara-bakiteny hoe "manarona". Misy ifandraisany amin'ny famadihana zavatra iray aminao amin'ny olon-kafa izany. Tatitra ao amin'ny 1. Ny Mosesy 29 dia manazava izany. Tonga teo amin’ny lavaka fantsakana Jakoba teny an-dalana ho any Mesopotamia, ary tao no nihaonany tamin-dRahely. Te hampisotro rano ny ondriny izy sy ny hafa, nefa nisy vato mavesatra nanarona ny varavaran’ilay fantsakana. Dia niakatra Jakoba ka nanakodia ny vato taminy
Manokatra ny fantsakana »(andininy 10) ary mampisotro ny ondry. Mitovy amin’ny hoe “baiko” ao amin’ny Ohabolana 1 ny teny hebreo hoe “mihosinkosina” eto6,3. Ao amin’ny Salamo faha-3 koa ny teny hoe mikodiadia amin’ny heviny hoe manodina enta-mavesatra ho an’Andriamanitra7,5 sy 55,23 mahita. Izany dia maneho ny fiankinana tanteraka amin’Andriamanitra.Nanoratra toy izao koa ny apostoly Petera: “Ny fiahianareo rehetra
atsipy azy; satria miahy anao izy »(1. Petrus 5,7). Ny teny grika nadika hoe “manipy” dia tena mitovy amin’ny teny hoe “mandidy” amin’ny teny hebreo, izay nadika koa hoe “manakodia na manipy (ho)”. Fihetseham-po avy amintsika izany. Hitantsika koa ny teny hoe “manipy” ao amin’ny fitantarana ny nidiran’i Jesosy tao Jerosalema rehefa nitaingina ampondra
- “ary nariany ny fitafiany teo amin’ny voky” (Lioka 19,35). Atsipazo ao an-damosin'ny Tompontsika izay mampanahy anao. Izy no hikarakara izany satria mikarakara anao.
Tsy afaka mamela olona ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra izany! Tezitra ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra izany! Matahotra ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra ity! Leo ny tsy rariny eto amin'ity tontolo ity? Atsipazo amin'Andriamanitra ity! Mifampiraharaha amin'olona sarotra ve ianao? Apetraho amin’Andriamanitra ny enta-mavesatra! Efa nampijaliana ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra izany! Kivy ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra izany! Tsy izay ihany anefa. Tsy misy fepetra ny fanasan’Andriamanitra “hanipy azy”. Nanoratra i Solomona fa na inona na inona ataontsika dia azontsika atao ny manipy an’Andriamanitra. Mandritra ny dianao amin'ny fiainana, apetraho amin'Andriamanitra ny zava-drehetra - ny drafitrao, ny fanantenanao ary ny nofinao. Rehefa atsipinao amin’Andriamanitra ny zavatra rehetra dia tsy ao an-tsainao fotsiny no ataonao. Tena manao izany. Ataovy anaty teny ny hevitrao. Miresaha amin'Andriamanitra. Ataovy mazava tsara: “Ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo.” (Filipianina 4,6). Lazao azy hoe: "Manahy aho ny amin'ny ..." "Hatolotro anao izany. Anao iny. Tsy hitako izay hatao”. Mametraka fifandraisana ny vavaka ary tena tian'Andriamanitra hitodika Aminy isika. Tiany hizara ny fiainantsika aminy isika. Te hahafantatra anao amin’ny alalan’ny tenanao izy! Te-hihaino anao Andriamanitra - eritrereto izany!
Ny teny hoe "mandidy" dia adika indraindray hoe "manankina" ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny Baiboly Amplified dia mandika ny Ohabolana 16,3 toy izao manaraka izao: “Ahoroho [na atsipazo] amin’i Jehovah ny asanareo [andidio / ankino aminy tanteraka izany].” Na inona na inona izany, ankino aminy izany. Atsofohy aminy izany. Matokia an’Andriamanitra fa hikarakara izany izy ary hanao izay sitrapony. Avelao izy ary tony. Inona no hitranga amin’ny hoavy? “Hanatanteraka ny fikasanao” Andriamanitra. Izy no hamolavola ny faniriantsika sy ny sitrapontsika ary ny fikasantsika mba hifanaraka amin’ny sitrapony ny zava-drehetra, ary hapetrany ao am-pontsika ny faniriany, mba ho tonga amintsika izany ( Salamo 3 Kor.7,4).